Usatya kutya kukundikana. Dzidza kubva pairi uye ramba uchienda. Kutsungirira ndiko kunogadzira kugona. - Asingazivikanwe - Anoteedzera Pedia
Kukundikana ndiyo mbiru yekubudirira. Pasina kukundikana, zvakaoma kuti unakidzwe zvakabikwa kubudirira. Zvakanaka, hapana vanhu vakadaro vasina vakapupurira kukundikana kanenge kamwe muupenyu hwavo. Kuti kuva chaiwo, hapana kuvapo kwoupenyu pasina kukundikana. Saka, ichava kusarudza zvakanakisisa kwamuri kuti kutadza kwako mudziyo kubudirira.
Tinoziva kuti kukundikana inotanga mwoyo wako uye anonyengera iwe kufunga kuti zvose zvapera. Nekudaro, ndeimwe yevadzidzisi vakanakisa muhupenyu hwako. Pane zvidzidzo siyana muupenyu hwako dzaunogona kudzidza chete kana iwe vakapupurira kukundikana.
Nekudaro, iwe unogona kuona kuti ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha izvo zvinokubatsira iwe kudzidza zvakawanda zvezvinhu nezve hupenyu. Nekudaro, kukundikana kwakakosha kana zvasvika pakubudirira kwehupenyu hwako.
Chimwe chinhu kuti unofanira kuyeuka ndechokuti pasinei nemamiriro ezvinhu ari haufaniri kurega. Unofanira kuita noupenyu hwako. Pachava ezvinhu yamuchashuva sokuti kumisa, asi iwe haufaniri kurega.
Iwe unofanirwa kuchengeta chinhu chimwe mupfungwa dzako kuti kushingirira ndiko kiyi yekubudirira. Unofanira kuramba muupenyu hwako sezvo ndiyo chete nzira ichaita iwe vakananga chinangwa chako. Zvakare, zvinowedzera chivimbo chako uye zvinokubatsira kuti uenderere mberi nehupenyu hwako. Kunze kwezvo, iri imwe yedzakanakisa nzira dzekuwana mufaro sezvo chiri chinhu chakakosha.
Saka, pasinei nokuti chii chinoitika, haufanirwe kurasikirwa nekukurudzira kwako. Kana zvimwe zvakaoma kuti awane achida kuenda. Kana iwe ukazvimisa pachako pakuedza, hapana nzira yekuzadzisa chinangwa chako. Nenzira iyi, iwe hapana chauchapupurira asi kutadza.
Usatya Kutya Quotes
Kutya Kukundikana Quotes
Ramba Uchienda Quotes
Ramba uchienda Kuenda Quotes Uye Kutaura
Ramba uchienda Kuenda Quotes On Motivation
Dzidza Kubva Pane Zvikanganiso Quotes
Shingirira Kukurudzira Kukurudzira Quotes
Quotes Pamusoro pekutadza uye Kusapa
Quotes Pamusoro pekutya Kukundikana
Quotes About Kudzidza Kubva Kukanganiso
Quotes Ekupfuurira uye Kutsunga
Wese munhu ane shamwari panguva yega yega yehupenyu. Asi vane rombo rakanaka chete vane shamwari imwechete mumatanho ese ehupenyu. - Asingazivikanwe
Wese munhu ane shamwari panguva yega yega yehupenyu. Asi vane rombo rakanaka chete vane shamwari imwechete mu…
Vamwe vanhu havangambokwani muhupenyu hwako, kunyangwe zvaunoda zvakadii kwavari. - Asingazivikanwe
Vamwe vanhu havangambokwana muhupenyu hwako, zvisinei nehukuru hwesimba raunodurura mukati…
Iva nekutenda kune ese matambudziko aunosangana nawo. Ivo vanokuita iwe kusimba, huchenjeri uye kuzvininipisa. Usairegedze ichikuvhuna iwe rega iite iwe - Asingazivikanwe
Pane dzimwe nguva dzakaoma muhupenyu hwedu, apo patinofanira kupfuura nemumatambudziko akawanda.…
Kunamata kunoita kuti zvese zvive nani. - Asingazivikanwe
Kunamata kunoita kuti zvese zvive nani, uye ndizvozvo! Kazhinji, tinosangana nematambudziko mazhinji mu…